FALANQEYN XASAASI AH:- Sii Deynta C/rixmaan C/shakuur Iyo Saameynta Ay Ku Yeelaneyso Jiritaan Dowladda Farmaajo – Puntlandtimes
FALANQEYN XASAASI AH:- Sii Deynta C/rixmaan C/shakuur Iyo Saameynta Ay Ku Yeelaneyso Jiritaan Dowladda Farmaajo
December 21, 2017 Puntland PL
MUQDISHO(P-TIMES)-Maxkamadda Gobalka Banaadir ayaa ku dhawaaqday in Siyaasi C/rixmaan C/shakuur Warsame, oo ka mid ah Siyaasiyiinta Sida weyn uga dhex muuqda Fagaarayaasha Siyaasadeed ee Soomaaliya, Ahna Hogaanka sare ee Xisbiga Siyaasadeed ee Wadajir, oo habeenkii axada weerareen ay ku qaadeen Ciidamada NISA ku soo xireen, uusan laheyn Wax Dambi ah haatana uu yahay Xor.
Gudoomiyaha Maxkamadda ayaa Sheegay in Xeer ilaalinta Qaranku ay ku fashilantay in ay cadeymo u keento eedeymaha ay u soo jeedisay Siyaasiga, waxaana kaloo ay sheegtay in xeer ilaalintu ku guuldareysatay in ay Maxkamaddu u ogalaato 5 Cisho oo ay ka codsatay, maadama ay awal xiritaankiisii loo soo marin Maxkamadda.
Gudoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir, ayaa intaasi ka dib sheegtay in C/rixmaan C/shakuur uu yahay Haatan Mid xor ah oo aan laheyn Wax dambi ah, si sharci darro ahna loo soo xiray, iyadoona Banaanka ku tuurtay in racfaan laga qaato sii deynta C/rixmaan C/shakuur.
Go,aanka Maxkamadda Gobalka Banaadir ayaa noqday Mid xasaasi ah, iyadoona Maxkamaddu muujisay Tilaabadii ugu wacnayd ee soo jiidatay Indhaha Bulshada Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka oo si dhow ula socday Go,aanka ay ka qaadan doonto iyo jidka ay u mari doonto Xariga Siyaasigan.
Maxkamadda ayaa dhinac kale muujisay in ay ka madax banaan tahay Golayaasha Dowladda, sida Sharci Dajinta iyo Fulinta, waxaana ay Qidhay in ay diyaar u tahay ilaalinta Cadaalada iyo in laga hor tago dulmi sababi kara in dalku dib ugu laabto Burbur iyo halkii horey uu uga yimid.
XARIGII & SII DEYNTA C/RIXMAAN C/SHAKUUR.
Saacado ka dib Weerarkii lagu qaaday iyo Xarigii C/rixmaan C/shakuur, ayaa dood ka abuuray Baraha Bulshada, waxaana dadka Soomaaliyeed isku dhaafsanayeen Qaabka loo maray Xariga Siyaasiga in uu yahay Sax ama Khalad.
Bulshada Soomaaliyeed oo ay ka Muuqato daal iyo in loo baahan yahay Xasilooni Siyaasadeed iyo mid amni ayaa isku raacay intooda Badan in ay Dowladda Federaalku ku Khaldaneyd qaabka ay u martay Xarigiisa iyo weerarkii foosho xumaa ee lagu qaaday Guriga siyaasiga laguna dhaawacay isaga, 5 ilaaladiisa ah iyo qof haweenayana lagu dilay.
Dhinaca kale, Dadka ka faalooda Xaaladaha Siyaasadeed ee dalka iyo Sharci yaqaanada ayaa Odorasay in Dowladda Federaalku ay ku deg deg tahay weerar lagu Qaaday C/rixmaan C/shakuur, iyagoona qaarkood oo xiligaasi la hadlay PUNTLAND TIMES, sheegay in go’aanka lagu xiray laguna weeraray Hoyiga siyaasiga ay aheyd fikir ka yimid dad aan laheyn khibrad siyaasadeed iyo mid sharci.
Sii deynta siyaasiga ayaa mar kale abuurtay Xasarad cusub, ka dib markii qaab damiin ah Xalay looga soo daayay Xabsiga Ciidamada NISA ee Maama Khadiija, iyadoona Sharci yaqaan la hadlay PUNTLAND TIMES, uu sheegay in Dowladda Federaalku u muuqato mid aan laheyn khibrad, Isagoo intaasi sii raaciyay in Damaanada lagu sii deynayo Siyaasi C/rixmaan C/shakuur ay laheyd Maxkamadda Gobalka Banaadir oo uu yaalay Kiiskiisu, haatan ku weyday Wax dambi ah.
GUUSHA C/RIXMAAN C/SHAKUUR.
Siyaasi C/rixmaan C/shakuur Warsame ayaa ah Masuul Xilal kala duwan ka soo qabtay Dalka, kana soo shaqeeyay Golayaasha Sharci Dajinta iyo Fulinta, isagoona Soo noqday Xildhibaan, sidoo kalena Xukuumaddii Ra’iisulwasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ka soo noqday Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiraarka Caalamiga ah.
C/rixmaan oo ah Siyaasi ku Caan baxay Fagaarayaasha Siyaasadeed ee lagu hayo Doodaha iyo Dhaliilaha Quseeya Dowladda Haatan jirta ee Farmaajo, ayaa Arka Fursadii ugu qaalisaneyd ee ku siibi lahaa taageerada yar ee gacanta ugu hartay Madaxda ugu sareysa Dalka ‘Farmaajo iyo Kheyre’.
Siyaasigan oo aad moodo in ay Fududahay ka gadiska Qorshihiisa Siyaasadeed ee Xaalada Dalka ayaa marakan muuqataa in uu helay, wadadii in badan oo ka tirsan Shacabka soomaaliyeed kuna dhagan Siyaasada Dowladda Farmaajo, uga dhaadhicin lahaa Daloolada aan loo dulqaadan karin ee uu aaminsan yahay in ay ka muuqato Dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Mid ka mid ah Dadka ka faaloda Siyaasada Dalka oo PUNTLAND TIMES la hadlayay ayaa yiri “Dhoolo cadeynta iyo Farxada ka muuqatay C/rixmaan C/shakuur kolkii xalay laga soo daayay Xabsiga, ayaa aheyd tan muujinaysa Hadafka Siyaasadeed ee Warsame, Aqoonta aan u lee yahay C/rixmaan waa nin leh siyaasad ku dhisan Xeel dheeri iyo Gabad la,aan, wuxuuna haatan u muuqdaa in uu helay jidkii uu ku dhaliili lahaa Madaxda sare ee Dalka iyo Hab-dhaqankooda Siyaasadeed ee dal iyo Dibadba”
Dhinaca kale, C/raxmaan C/shakuur ayaa markii la soo daayay ugu baaqay madaxda dowladda in dalka laga gudbay xilligii qori caaradii wax lagu maquunin lahaa, isla markaana aan dalka dib loo celinin.
C/rixmaan C/shakuur oo ay ka muuqatay Kalsooni buuxda, ayaa sidoo kale tilmaamay in Wajigii labaad ee Maxkamadda ay haatan hartay, isagoona uga go lahaa in uu furanayo Dacwad la xiriirta weerarka lagu qaaday iyo Ilaaladiisii la laayay.
Hadalkaan ka soo yeeeray C/rixmaan C/shakuur, Xariggii loo geystay Siyaasigan iyo Sii deynta Markii lagu waayay Dambiga ee Maxkamadda ayaa u muuqata mid u soo kasbaysa Taageerayaal badan oo ka tirsan Bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo horey aragti adag uga Haystay Siyaasiga.
SAAMEYNTA UU KU YEELAN DOONO MADAXDA SARE EE DALKA.
Villa Soomaaliya ayaa haatan u Muuqata in ay Wajahayso Mowjado siyaasadeed oo ka badan kana kulul, kuwii ay Bilihii ugu dambeeyay ay Dhex Dabaalaneysay, iyadoona haaatan weynaysa Cudud Siyaasadeed oo difaac uga ahaa Mowjadaha ku dul wareegaya Hareeraheeda, sidoo kalena qeyb uga ahaa kala fur furka Xarigyada lagu ceejinayo.
Xariggii aan loo fakarin ee lala tiigsaday Siyaasi C/rixmaan C/shakuur iyo sii deynta Maxkamadda ee markii dambi lagu waayay, ayaa Waji Cusub u yeeli doono siyaasadda Madaxda Sare ee dalka, waxaana ay ku waayi doonaan Taageerayaal badan oo ka mid ah Bulshada Soomaaliyeed iyo Xildhibaanada Labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisulwasaare kheyre oo ay ka muuqato Fudeyd iyo Khibrad la,aan Siyaasadeed, oo gabad ku ah ilaa haatan Gacanta Farmaajo, sidoo kalena ku caan-baxay Khudbadaha Jiheysan ee uu uga hadlayo Calooshii wax ku jira, ayaa markan ay muuqataa in ay ka hartay waxyar Wadkii dili lahaa Xukuumadiisa.
Ilo Rasmi ah ayaa u sheegay PUNTLAND TIMES, in Madaxweyne Farmaajo haatan soo wajahday Jahwareer Siyaasadeed, iyadoona ay mudooyinkii u dambeysay ay mashquulisay kala fur furida Mooshinkii ugu weynaa ee la doonayo in talada looga Tuuro Madaxweyne Talada haya wax aan Sanad dhameyn.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa waxaa Culeyska ku sii kordhiyay Xarigii Siyaasi C/rixmaan C/shakuur oo sida ay ogaatay PUNTLAND TIMES, aan markii hore lagala sameyn wax tashi ah, iyadoona ay Fikirkaasi lahaayeen Ra’iisulwasaare kheyre iyo Agaasimaha Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin.
Fikirkaan oo la sheegay in Kheyre iyo Fahad muddo Gorfeynayeen ayaa la Diyaariyay Xiligii Madaxweyne Farmaajo uu ku maqna Shirkii Madaxda Africa iyo Yurub ee ka dhacay Ivery Coast, waxaana ay kadis ku noqday Farmaajo, isagoona la sheegay in haatan uu dareemayo in aan la loodin karin Mucaaradkiisa oo helay Fursado Muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay Guuldaro aan la qarin karin ka soo gaartay Xariga Siyaasigan, iyadoon haatan wajahaysa Cudud Mucaarad ah oo ay adag tahay in ay ku guuleysato in ay Dib u hakiso.
C/rashiid C/laahi Warsame